Mpanamboatra sy mpamatsy takelaka vita amin'ny busa 3mm China | Gokai
Raha ny teknolojia ankehitriny dia afaka manome takelaka misy vovoka 1-30mm PVC izahay. Anisan'ireny, ny tabilao vita amin'ny 3mm PVC dia famaritana malaza indrindra. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia mampiasa azy amin'ny fanontana sy fanaovana takelaka fanaovana dokam-barotra. Ny 3mm dia mizara ho takelaka maimaim-poana amin'ny PVC sy board celuka PVC. Ny faritra ambonin'ilay solaitrabe maimaimpoana dia marokoroko, izay mahasalama mandray ny ranomainty fanontana. Ny haavon'ny tabilao celuka dia somary malefaka ary ampiasaina amin'ny sary sokitra.
Lazao amiko ny fampiasanao azy ary hatolotray anao ny vokatra mety indrindra ho anao.
Fomban'ny Board UV foam
1) Jiro volom-borona, tsy mifoka, mpamono afo ary mamono tena
2) Porofo manamarina ny toetr'andro, porofon'ny fanimbana, ary azo volavolaina, nohosorana, nolokoina ary namboarina ny efijery, mety amin'ny fanapahana, tsofa, fehy, fametahana, famolavolana hafanana, famantsihana, fikolokoloana, famoronana lava.
3) Tsy mahazaka, tsy misy poizina ary mahazaka simika
4) Mafy, henjana miaraka amin'ny tanjaka misy fiatraikany lehibe
5) porofo tsy misy ady sy porofon-tory
6) Mora ny manadio sy mitazona
Fampiharana Board UV busa
1). Kabinetra fampiratiana, talantalana ao amin'ny fivarotana lehibe
2). Birao dokambarotra sy tabilao fanaovana sonia
3) .ny takelaka fanaovana doka ho an'ny fanontana, sokitra, fanapahana, tsofa
Azo alefa aminao amin'ny fotoana rehetra
Araka ny lalàna mifehy ny orinasanay, ireo mpividy vaovao dia tsy maintsy mandoa ny saram-pitsaboana sy ny sarany fandefasana entana.Fa indrindra indrindra, hanana ny fandaminana mifandraika amin'izany izahay.Raha ny momba ny mpanjifa mahazatra dia hatolotray maimaimpoana ny santionany, saingy tsy maintsy mandoa ny vidin'ny entana izy ireo
Famaritana ho an'ny tabilao vita amin'ny 3mm PVC
Fotsy, mainty, mena, manga, mavo, maintso, sns
NY hateviny hafa pvc foam board / haben'ny ravina
Sakany: 1250mm-2050mm, 2050mm amin'ny max.
Halava: Ny halavany rehetra.
habe mahazatra: 1220 * 2440mm, 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm
FANAMARIHANA: afaka manao habe hafa mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa isika
FANOMEZANA L / C, T / T, Western Union, Alibaba pay, Paypal
MOQ 1mm: 300pcs 2-6mm: 200pcs 7mm ambony: 100pcs
Delivery 15 andro aorian'ny fanamafisana ny kaomandinao
kitapo plastika na baoritra naondrana, ravina maromaro isaky ny pallet na arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Azontsika atao koa ny mifanila amin'ny sarimihetsika PE.
Teo aloha: UV pirinty foamboard 2mm
Manaraka: 4mm plastika plastika PVC